အတ္တလန်တာ တိုက်စစ်မှုးကြီး အီလီဆစ် တစ်ယောက် PSG နဲ့ ပွဲကို ဘာကြောင့် လွဲချော်ခဲ့တာလဲ ? - SPORTS MYANMAR
အတ္တလန်တာ တိုက်စစ်မှုးကြီး အီလီဆစ် တစ်ယောက် PSG နဲ့ ပွဲကို ဘာကြောင့် လွဲချော်ခဲ့တာလဲ ?
အီတလီ စီးရီးအေ ကလပ် အတ္တလန်တာ ဟာ ပြီး ခဲ့တဲ့ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ ညက ချန်ပီယံလိဂ် ကွာတား ဖိုင်နယ် ပွဲစဉ် အဖြစ် ပြင်သစ် လီဂူးဝမ်း ချန်ပီယံ PSG နဲ့ ယှဉ်ပြိုင် ကစားခဲ့ ပါတယ် ။ အတ္တလန်တာ ဟာ PSG ကို ဦးဆောင်ဂိုး သွင်းပြီး မိနစ် ၉၀ ပြည့်သည် အထိ ဦးဆောင် ထားနိုင် ခဲ့ ပေမယ့် ၃ မိနစ် အတွင်း ၂ ဂိုး ပြန်ပေး ခဲ့ရပြီး ရှုံးနိမ့် ခဲ့ရ ပါတယ် ။ အတ္တလန်တာ ဟာ ဒီရာသီမှ ချန်ပီယံလိဂ် ကို စတင် ယှဉ်ပြိုင် ခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး ကွာတား ဖိုင်နယ် အဆင့်ကနေ လှည့်ပြန် ခဲ့ရ ပေမယ့် သူတို့အတွက် ကြီးမားတဲ့ အောင်မြင်မှု ဖြစ်ခဲ့ရ ပါတယ် ။
PSG ဘက်မှာ နေမာ အထူး ခြေစွမ်းပြသွား ခဲ့ ပေမယ့် အမ်ဘာပေ လူစားဝင်လာမှု ဟာ ပွဲ ရလဒ် ကို အဓိက ပြောင်းလဲဖို့ ဖြစ်စေ ခဲ့တယ်လို့ ကျွမ်းကျင် သူတွေက သုံးသပ် ခဲ့ကြ ပါတယ် ။ အမ်ဘာပေ ဟာ ဇူလိုင်လ ကုန်ခါနီး မှာ ဒဏ်ရာ ရရှိခဲ့ တာဖြစ်ပြီး ဒီပွဲကို လွဲမယ်လို့ အသံထွက်ခဲ့ ပေမယ့် နောက်ဆုံးမှာတော့ အရန်လူ အဖြစ် ပါ၀င် နိုင်ခဲ့ ပါတယ် ။
ပြင်သစ် ကလပ် ဘက်မှာ ဒီလိုမျိုး ကံကြမ္မာ ရဲ့ မျက်နှာသာ ပေးမှု ရှိခဲ့ ပေမယ့် အတ္တလန်တာ က တော့ သူတို့ရဲ့ အဓိက ကစား သမား တစ်ဦးကို ဆုံးရှုံး ခဲ့ရ ပါတယ် ။ အဲ့ဒီလူကတော့ အီလီဆစ် ပါပဲ ။ စလိုဗက်ကီးယား တိုက်စစ်မှုး ဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ လ ခန့် ကတည်းက အိမ်ပြန် သွားခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး PSG နဲ့ပွဲကို လွဲချော် ခဲ့ ပါတယ် ။
“အခု ကျွန်တော်တို့ နဲ့ အီလီဆစ် မရှိနေ ပါဘူး ၊ အချိန်တွေ လည်း အကြာကြီး ကုန်ခဲ့ ပါပြီ ၊ ချန်ပီယံလိဂ် မှာ သူ ၀င်ကစား နိုင်ဖို့ အခွင့်အရေး က တဖြည်းဖြည်း နည်းနေ ပါပြီ ။ PSG နဲ့ ပွဲမှာ သူမပါဘဲ ကစားရဖို့ က သေချာ သလောက် ပါပဲ” လို့ အတ္တလန်တာ နည်းပြ ဂက်စပါရီနီ က ဇူလိုင်လ ထဲမှာ ပြောကြား သွားခဲ့ ပါတယ် ။
အီတလီ သတင်းစာ အချို့ ကတော့ အီလီဆစ် ဟာ ဘောလုံး ကစားခြင်း ကနေ အနားယူဖို့ အထိတောင် စဉ်းစား နေတယ်လို့ ရေးသား ဖော်ပြ လာခဲ့ပါတယ် ။ ဒါဟာ ဘောလုံး ပရိသတ်တွေ ကို အကြီးအကျယ် အံ့အား သင့်စေခဲ့ ပါတယ် ။ ဘယ်လို ကစား သမားမျိုးက သူ့ရဲ့ အကောင်းဆုံး အခိုက်အတန့်မှာ အနားယူဖို့ စိတ်ကူး မလဲ ဆိုတာ မတွေးတတ် အောင်ဖြစ်ခဲ့ ရ ပါတယ် ။
ဒါပေမယ့် အီလီဆစ် ကတော့ အားလုံး နဲ့ အဆက်အသွယ် ဖြတ်ကာ စလိုဗက် မှာ ဆက်လက် နေထိုင် နေခဲ့ ပါတယ် ။ ဘာကြောင့် အတ္တလန်တာ ကို ပြန်မလာခဲ့တာလဲ ၊ အသင်းရဲ့ သမိုင်းဝင် ခရီးလမ်းမှာ အီလီဆစ် တစ်ယောက် ဘာကြောင့် မပါ၀င် နိုင်ခဲ့တာလဲ ?
ဒီမေးခွန်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အဖြေအမျိုးမျိုး ထွက်လာခဲ့ ပါတယ် ။ ကနဦး ပေါ်ထွက် လာခဲ့တဲ့ သတင်းကတော့ တော်တော်လေး အခြေအမြစ် မရှိခဲ့ ပါဘူး ။ အဲ့ဒါက တော့ အိမ်ပြန် သွားတဲ့ အီလီဆစ် ဟာ ဇနီးသည် ကို အခြား အမျိုးသား တစ်ဦးနဲ့ တွေ့ခဲ့ ရတယ် ဆိုတာပါပဲ ။ တနည်းပြောရရင်တော့ အီလီဆစ် သစ္စာဖောက်ခံ လိုက်ရတာပါ ။
ဒီသတင်းတွေ ဟာ အီလီဆစ် နဲ့ ဇနီးသည်တို့ ရဲ့ ဓါတ်ပုံတွေ ပေါ်ထွက် လာမှုနဲ့ အတူ ပျောက်ဆုံး သွားခဲ့ ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် အီတလီ သတင်းစာတွေက တိုက်စစ်မှုး ဟာ အရမ်း အစိုးအရိမ် ကြီးသူ ၊ အကြောက်ကြီးသူ ဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြ လာခဲ့ပြီး အီတလီ က အခြေအနေတွေ ဟာ သူ့အပေါ် အလွန်စိုးရိမ်စိတ် တွေ ဖြစ်စေ ခဲ့တယ်လို့ ဖော်ပြ လာခဲ့ ပြန်ပါတယ် ။
အီတလီ ဟာ ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ် ကြောင့် လူပေါင်းများစွာ သေဆုံးခဲ့ရ ပါတယ် ။ အဲ့ဒီ အထဲ မှာ အတ္တလန်တာ အခြေစိုက်တဲ့ ဘာဂါမို ဒေသဟာ အများဆုံး ဖြစ်ပြီး စစ်တပ်ရဲ့ အကူအညီ နဲ့ သေဆုံးသူတွေကို သယ်ထုတ် ခဲ့ရသည် အထိ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ် ။ အတ္တလန်တာ နဲ့ ဗလင်စီယာ တို့ ကစားခဲ့တဲ့ ၁၆ သင်းဆင့် ပွဲစဉ် ဟာလည်း ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ် ကို စပိန် နဲ့ အီတလီ မှာ ပြန့်နှံ့မှု ကြီးမားအောင် တွန်းအားပေး ခဲ့တဲ့ အရာ အဖြစ် ခေါင်းစဉ်တပ် ဝေဖန်ခြင်း ခံခဲ့ရ ပါတယ် ။
ဒါတွေ ဟာ အီလီဆစ် ရဲ့ အတွေးထဲမှာ စိုးမိုး နေနိုင်ပါတယ် ။ သူ့ရဲ့ သားလေးဟာ ဦးနှောက် အမှေးယောင် ရောဂါ ကို ခံစား နေရပြီး ဒီလို အချိန်အခါ မှာ မိသားစုထက် အရေးကြီးတာ ဘာမှ မရှိဘူးလို့ အီလီဆစ် တွေးတောကာ အန္တရာယ် များတဲ့ အီတလီ ကို ပြန်မလာဖို့ ဆုံးဖြတ် ထားတာလည်း ဖြစ်နိုင် ပါတယ် ။
၂၀၁၈ အတွင်းက ဖီအိုရင်တီးနား အသင်းခေါင်းဆောင် အက်စတိုရီ ကွယ်လွန်မှု အပြီးမှာ ပြောဆိုခဲ့တဲ့ အီလီဆစ် ရဲ့ စကားတွေမှာ သူ့ရဲ့ မိသားစုပေါ် ထားရှိတဲ့ ခံစားချက် ကို မြင်သာ စေခဲ့ပြီး ယူဆချက်တွေ ကို ပိုမို ခိုင်မာစေခဲ့ ပါတယ် ။
“ကျွန်တော် အိပ်လို့တောင် မပျော် နိုင်ခဲ့ ပါဘူး ။ သူ့အကြောင်း ( ဟိုတယ် မှာ အိပ်ပျော်ရင်း ကွယ်လွန် ခဲ့သည့် ဖီအိုရင်တီးနား အသင်းခေါင်းဆောင် အက်စတိုရီ ) ကို အမြဲတွေးနေ မိပါတယ် ။ ငါသာ ဒီလို ဖြစ်ရင် ဘယ်လို လုပ်မလဲ ၊ ငါ့သမီးလေးကို ဘယ်တော့မှ မတွေ့နိုင်တော့ ဘူးဆိုရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ ဆိုတာတွေက ကျွန်တော့ ခေါင်းထဲမှာ ကြီးစိုး နေခဲ့ပါတယ်” လို့ အီလီဆစ် က Corriere dello Sport သတင်းစာ ကို ၂၀၁၈ တုန်းက ဖွင့်ဟ ပြောဆို ခဲ့ဖူး ပါတယ် ။
ဒီအဖြစ်ဆိုး အပြင် ၂၀၁၈ ရာသီမစခင် မှာ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ သေစေနိုင်လောက်တဲ့ မတော်တဆမှု ဟာ အီလီဆစ် ရဲ့ စိတ်ပိုင်း ဆိုင်ရာကို အကြီးအကျယ် ထိခိုက် စေခဲ့ ပါတယ် ။ တိုက်စစ်မှုး ဟာ အတ္တလန်တာ ရဲ့ ရာသီကြို ပွဲတွေ ကိုလွဲချော် ခဲ့သလို စက်တင်ဘာ လောက် အထိ ကောင်းကောင်း ပြန် မကစားနိုင် ခဲ့ ပါဘူး ။
အတ္တလန်တာ နည်းပြ ဂက်စပါရီနီ ဟာ သူ့ရဲ့ တိုက်စစ်မှုး ကို စိတ်ပြန်လည် လာစေဖို့ အတွက် အစွမ်းကုန် ကြိုးစား ခဲ့ပေမယ့် အီလီဆစ် ရဲ့ စိတ်ကို ပြန်လည် ဆွဲဆောင်ဖို့ ခက်ခဲ ခဲ့တယ်လို့ ဖွင့်ဟ ပြောဆိုသွားခဲ့ ပါတယ် ။
“သူ့ကို စိတ်ပြောင်းအောင် ၊ စိတ်ဓါတ် တက်အောင် အမျိုးမျိုး ကြိုးစားခဲ့ ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် သူက တော်တော်လေး ဆိုးရွား ခဲ့တာပါ ၊ လေ့ကျင့်ခန်းပြီး တိုင်း ဒီနေ့ ဘယ်လိုလဲလို့ ကျွန်တော် သူ့ကို မေးပါတယ် ။ သူက မကောင်းဘူး မကောင်းဘူးချည်းပဲ ပြောခဲ့တာပါ ၊ ကျွန်တော် ကတော့ မင်းမနေ့ကထက် တော့ ပိုကောင်း လာတယ်လို့ ပြောခဲ့ရ ပါတယ် ။ အကြာကြီး ပါပဲ” လို့ ဆိုသွားခဲ့ ပါတယ် ။
ဒီကိစ္စတွေ က အီလီဆစ် ဟာ မိသားစု ကို အလွန် ခင်တွယ်သူ ၊ စိတ်ခံစားချက် နုနယ် သူလို့ ယေဘုယ ကောက်ချက် ချနိုင်ပါတယ် ။ ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ်လို မမြင်ရဘဲ သေစေနိုင်တဲ့ ကျန်းမာရေး ကပ်ဘေးဆိုး ကာလ အတွင်းမှာ စစ်ဘေးသင့်နေတဲ့ စလိုဗက်ကီးယား က မိသားစုကို ထားခဲ့ပြီး အီတလီ ကို တစ်ယောက်တည်း ပြန်လာဖို့ ဆိုတာ အီလီဆစ် လို လူမျိုးအတွက် အရမ်းကို ခက်ခဲတဲ့ ကိစ္စ ဖြစ်နေမှာ အသေအချာပါပဲ . . . . .